SAVOROVORO ISAKY NY FIFIDIANANA : “Vahaolana ny fanovana ny fomba fiasa ho Biometrika”
Hatramin’izay dia saika nahitana lesoka sy tsy fahatomombanana hatrany ny fikarakarana ny fifidianana teto Madagasikara. 13 mars 2020
Ny lisi-pifidianana no tena niteraka olana sy nampiteraka savorovoro teo amin’ny samy kandida na ireo antoko politika. Nanamafy ny filohan’ny Céni, Hery Rakotomanana fa ny hirosoana amin’ny fomba fiasa ho biometrika no anisany vahaolana mandaitra indrindra hialana amin’ny tsy fietezana isaky ny fifidianana indrindra hisiana korontana tahaka izao zava-mitranga ankehitriny izao. Isan’izany, ohatra, ny fanovana ny lisi-pifidianana ho biometrika, ny fanovana ny kara-pifidianana ho biometrika.
Ny fiandohan’ity taona ity dia nisy ny atrikasa izay nataon’ny Céni niarahana tamin’ ireo mpiara-miombon’antoka vahiny nanaovana ny jery todiky ny fizotry ny fifidianana tamin’ny taona lasa iny. Anisany nivohitra tamin’izany io soso-kevitra fanovana ny fomba fiasa ho biometrika io.
“Manamafy ny tolo-kevitra avy ao amin’ny atrikasa famaranana ny Sacem izahay manodidina ny tokony hidirantsika amin’izay amin’ny fomba fiasa biometrika. Izany dia mba hananantsika lisitra manara-penitra kokoa ka hialana amin’ny savorovoro tahaka izao”, hoy ny filohan’ny Céni. Fantatra fa amin’ny alakamisy 19 marsa izao no hitondra fampisehoana sy hitondra fanazavana ampahibemaso mahakasika ny lisi-pifidianana ny Céni. Hiantsoany an’ireo mpiara-miombon’antoka rehetra izany mba hiantohana hatrany ny mangarahara eo amin’ny lisi-pifidianana izay hampiasaina amin’ny fifidianana manaraka.